09 / 08 / 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
နေ့: သြဂုတ်လ92019
IETT နှိပ်စက်ခံရသူ၏တည်နေရာ Cut မှကင်ပိန်းကိုင်ထားရန်
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, နိုင်ငံသားများ၏အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာခံရသောပွဲဖြုန်းဖို့အားလုံးလိုအပ်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများယူခဲ့ပါတယ်။ ကိုမဆိုအဆိုးမြင်အတွေးတွေရှောင်ရှားရန်မီနှင့်အပြီးအားလုံးစိုးရိမ်ပူပန်ယူနစ်နှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ခံရသောပွဲလိုအပ်သောအစီအမံများချဉ်းကပ်မနက်စောစော Al-Adha [ပို ... ]
တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်သုံးဖြုန်းဖို့Başkentlilerနှင့်အတူမနက်စောစော Al-Adha သည့်ယူနစ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းအတွက်အားလုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ အနစ်နာခံ၏4နေ့ကပွဲစဉ်ကာလအတွင်းနိုင်ငံသားများ, (သြဂုတ်လ 11 14-2019) သည်အတ္တ site ကိုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး [ပို ... ]
အဆိုပါပြီးစီးခဲ့စီမံကိန်း၏ရာခိုင်နှုန်းကို 40 မှ Rize, Artvin လေဆိပ်ပိတ်
အတူတူမုဆိုး Rize နှင့် Artvin လေဆိပ်နှင့်အတူဝန်ကြီး Turhan, AK ပါတီလက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ Hayati Yazici, Rize အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Kemal ချော်, အ AK ပါတီ Rize လက်ထောက် Osman Aşkın bak နှင့်မိုဟာမက်သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိ bulunarak အရာရှိများကအဆောက်အဦးကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ Turhan, ပြန်လည်သုံးသပ် [ပို ... ]
မြို့ကောင်စီကတညီတညွတ်တည်းခေါ်ဆောင်သွားနှင့်အနစ်နာခံဘတ်စ်ကားနှင့်ပေါ်လာတာဟာအရင်များ၏ပွဲအဖြစ်အခမဲ့အစေခံမည်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူဿွာန်၌ရှိသကဲ့သို့Eskişehirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်။ ထို့အပြင်လမ်းများ၏နိုင်ငံသားများအလွယ်တကူမနက်စောစောအလည်အပတ်ခရီးလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် [ပို ... ]
လူမှုရေး Facility အတွက်အသက်ရှင်ရန်လိုမင်းထက်နေ့ Antalya
အဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကားတော့ Pogo TopçamSarısuသင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ, Park ကတော့ Pogo ။ Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Inc ANET ။ အများပြည်သူတို့က operated လူမှုရေးအထောက်အပံ့များသည်အနစ်နာခံအရည်အသွေးကိုဝန်ဆောင်မှု၏ပွဲရောက်စေဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ cable ကိုကား Sarisu Ladies သဲသောင်ပြင်, ပျော်ပွဲစား Area နဲ့Topçam Tunektepe [ပို ... ]
Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Alinur Aktas နိုင်ငံသားများသူမွို့၌ခေါ်ဆောင်သွားအားလုံးအတိုင်းအတာဟာမနက်စောစော Al-Adha ၏လုံခြုံငြိမ်းချမ်းစွာလေထုထဲတွင်အသက်ရှင်ဖို့ကပြောသည်။ သူသည်မြို့အတွက်မနက်စောစော Al-Adha အပေါငျးတို့သစိတ်လှုပ်ရှားနေထိုင်ခဲ့ဟု Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Alinur Aktas, "Bursa [ပို ... ]
ပြည်နယ်အနှံ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများပေးဘတ်စ်ကားလျှပ်စစ်ကနေအနီရောင်ဘတ်စ်ကားနှင့်မြို့လယ်အတွင်းMANULAŞ်ထမ်းဆောင်ဘို့ထိုသူတို့အသက်ရှင်ဖို့ Manisa မြူနီစီပယ်,4အနစ်နာခံ၏နေ့ပွဲနိုင်ငံသားများ '' သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများကိုကာလအတွင်းကအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ 11-14 သြဂုတ်လ [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်း Kayseri အခမဲ့နေ့
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mamdouh Büyükkılıç'ın, အအနစ်နာခံ၏ပွဲအခမဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထုတ်ပြန်ကြေညာမည်ဖြစ်သည်။ Büyükkılıçသမ္မတ, မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဘတ်စ်ကားနှင့်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကို အသုံးပြု. အခမဲ့နိုင်ငံသားများအနေဖြင့်အကျိုးရှိမည်ဟုသူကဆိုသည်။ မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mamdouh Büyükkılıç'ın, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး [ပို ... ]
Konya သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး2အခမဲ့အတွင်းပထမဦးဆုံးနေ့ပွဲတော်
Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, အနစ်နာခံ၏ပွဲ၏နိုင်ငံသားများဖြေလျော့ပေးခြင်း, ငြိမ်းချမ်းသောဖြုန်းဖို့နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအစီအမံများကိုယူ။ မြို့တော်, ဘတ်စ်ကားများနှင့်လမ်းရထား၏နိုင်ငံသားများနှင့်အတူအားလပ်ရက်လည်ပတ်မှုအဆင်ပြေဖြုန်းဖို့နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအလုပ်လုပ်ပါ။ တနင်္ဂနွေပွဲစဉ်အတွင်းအများပြည်သူအခွန်အစေခံပါလိမ့်မယ် [ပို ... ]
အပိုဆောင်းအစီအမံulaşımparkAkçarayလမ်းရထားကပွဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားများ၏အသက်အဘို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြီးပြည့်စုံသည့်နေ့များတွင်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သမျှသိပ်သည်းဆဆန့်ကျင် grievances ။ နေ့ရထားစနစ်များညွှန်ကြားမှုကျင်းပခဲ့သောအစည်းအဝေးမတိုင်မီတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး; သန့်ရှင်းရေး, whatman operating system ကို, လမ်းရထား [ပို ... ]
Interchange အားဖြင့် Dilovasi Eyner (အရှေ့) စီမံကိန်း "Yavuz Sultan Selim လမ်း Connection ကိုလမ်းဆုံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များက Dilovasi Eyner" ဟုအဆိုပါလေ့လာမှုမှာလျှင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်မြို့ဝင်ဝနှင့်ထွက်ပေါက်အားဖြင့်စိတ်သက်သာရာရလိမ့်မည်။ စူလတန် Selim လမ်း superstructure အောက်မှာလေ့လာရေးစီး Eyner နေဖြင့်ပြုပြင်ခြင်းရှိ၏ [ပို ... ]
စီမံကိန်း URAYS ၏မီးမောင်းထိုးပြထားသည်!
အမျိုးသားနှင့်နိုင်ငံတကာအဆင့်ဆင့်မှာအမှုဆောငျဖို့ Eskisehir အတွက်အမျိုးသားအရည်အသွေးနှင့်ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ပြည်တွင်းရထားလမ်းယာဉ်များယုံကြည်စိတ်ချရမှုအဆငျ့ဆက်လက်ရထားစနစ်များစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်သုတေသနစင်တာ (URAYS ငါ) ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်သေချာစေရန်အလို့ငှာ, သမ္မတအစိုးရစနစ်ကပထမဦးဆုံးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် [ပို ... ]
Aydin Denizli ကားလမ်းတင်ဒါတစျဖနျမှပယ်ဖျက်
Aydin Denizli အမြန်ပြည့်စုံလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သို့လှည့်။ ကုမ္ပဏီစာချုပ်နူးညံ့သောကားလမ်းကိုလက်မှတ်ထိုးမပေးခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါတင်ဒါဒါနောက်တဖန်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ ယခုတင်ဒါ၏အေကေပါတီလက်ထောက်သတငျးကောငျးပေးခင်ကောင်းသောပါတီ Denizli လက်ထောက် Yasin Ozturk, [ပို ... ]
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ Murat rower နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များလမ်းရထားလမ်းကြောင်းဗိုလ်ကြီး Yahya အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုများအတွက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလက်မှတ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးထောကျပံ့အားပေးတော်မူ၏။ Rower ဒီနေရာမှာအရေးပါတဲ့ရှင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပုံဖမ်းတွန်းလှည်းလမ်းကြောင်းအားဖြင့်ပလက်ဖောင်းအားလုံး၏ဗိုလ်ကြီး Yahya အစားထိုး [ပို ... ]
ယာဉ်အသွားအလာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနေ့အားလပ်ရက်များနှင့် Alma ရဲ့ယာဉ်မောင်းနှင့်တာဝန်ရှိသူများတောင်းဆိုနေတဲ့တချို့ကဆောင်ရွက်ချက်များ၏အသုံးအနှုန်းများ၏ဖော်ပြချက်ထဲတွင်တစ်ဦးဦးခေါင်းကနေသတိပေးခဲ့သည်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများ၏ကုန်သည်ကြီးများ။ အဆိုပါအနစ်နာခံ 11-14 ၏အဘို့ဆောင်သောပွဲကသြဂုတ်လနှင့်ဒီဇင်ဘာလအကြားတနင်္ဂနွေနှင့်အတူပေါင်းစပ်နေစဉ် [ပို ... ]
Kocaeli အခမဲ့နေ့အတွက် Parkomatl ကားရပ်ရန်
တာဝန်ခံအခမဲ့နိုင်ငံသားများမှန်ဆောင်မှုများပေးရန်အအနစ်နာခံ၏ပွဲကြောင့် bel Inc ကို parkomatl ယာဉ်ရပ်နားအများကြီး။ အလေ့အကျင့်များနှင့်နိုင်ငံသားများကသူတို့မော်တော်ယာဉ်များ parking ၏ရှားပါးမှုကိုဆွဲမည်ဟုအားလပ်ရက်တစ်လျှောက်လုံးဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ လက်ရှိ CURRENT နေ့4Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ခြင်း, အနစ်နာခံ၏မြို့ပွဲများတွင်နိုင်ငံသားများ [ပို ... ]
ဘယ်သြဂုတ်လ 2019 14 15 နာရီအတွင်း Besiktas ခရိုင်အတွင်းရှိအချို့သောနည်းလမ်းများအတွက်ကြောင့်အစ္စတန်ဘူလ် "15 ယူအီးအက်ဖ်အေစူပါဖလားဗိုလ်လုပွဲ" ၌ကစားမည်ဖြစ်ပြီးအသွားအလာပိတ်ထားပါလိမ့်မည်။ အစ္စတန်ဘူလ် "2019 ယူအီးအက်ဖ်အေစူပါဖလားဗိုလ်လုပွဲ" ၌ကစားခဲ့သည့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ရဲ့ထောက်ခံမှု [ပို ... ]
Bayrampaşaဘတ်စ်ကားဘူတာယာဉ်ရပ်နားအများကြီး, ထိုညီလာခံအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီတရားဝင် IMM IMM İSPARKကုမ္ပဏီလွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ လွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ် IMM Yavuz Erkut အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့သူ့အဖွဲ့စဉ်အတွင်းအနီးကပ်အလုပ်လုပ်လိုက်ကြ၏။ Bayrampaşaဘတ်စ်ကားဘူတာများတွင်ယနေ့ပြီးဆုံးသောကာလ [ပို ... ]
Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer, လက်အောက်ခံİZBETONဖျော်ဖြေဖို့မြူနီစီပယ်ရန်အားလပ်ရက်လည်ပတ်မှုဖြင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်လည်းန်ထမ်း Izel ငွေကြေးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ İZBETON, Belkahve စက်ရုံ Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုမှာသန့်ရှင်းသောအခမ်းအနားတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက် [ပို ... ]
Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပုံမှန်အတိုင်းအားဖြင့် Post-အကဲဖြတ်အတွက်စျေးနှုန်းများကိုသတ်မှတ်ပေးရန်။ အသစ်အခွန် 15.08.2019 ၏နေ့စွဲကနေထိရောက်ပါလိမ့်မည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (UKOME)2နှစ်ပေါင်းအတူတူအကောက်အခွန်အပေါ်အများပြည်သူအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင် [ပို ... ]
ယနေ့တွင်သမိုင်းသြဂုတ်လ91909-i ဘယ်မှာသို့မဟုတ်အားလပ်ရက်အက်ဥပဒေထုတ်ဝေခဲ့ဝိသေသလက္ခဏာဖြစ်သည်။ (သတိပေးချက်များဥပဒေ)